I-China Abenzi besampula lesampula elilahlwayo le-virus kanye nabaphakeli | Zhancheng
Igciwane lesampula tube
Isetshenziselwa ikakhulukazi ukuqoqwa kwesampula, ukugcinwa, kanye nokuthuthwa kwamagciwane athathelanayo endaweni yokuphefumula, umgudu wokugaya ukudla, namasampula wesibani wokuzala. Ishubhu lesampula segciwane elingasebenzi lingagcina ukuqala kwesampula ngezinga elikhulu kakhulu. Ingasetshenziselwa ukubalwa kwegciwane nokutholwa, futhi ingasetshenziselwa ukulima igciwane kanye nokuzihlukanisa.
Ngokwesisekelo se-Hank's, ukwengezwa kwe-BSA, ama-antibiotic, ama-amino acid nezinye izithako ezizinzisa igciwane kungagcina ukusebenza kwegciwane ezingeni lokushisa elibanzi, kunciphise ijubane lokubola kwegciwane, futhi kukhuphule izinga elihle lokuhlukaniswa kwamagciwane.
Iqukethe i-ejenti yokuvikela amagciwane, isampula lizinzile isikhathi eside. Isikhathi sokugcina singu-1 unyaka ku-2-30 ℃. Ama-Swabs namashubhu okusampula anokucaciswa okuphelele ukuhlangabezana nezimo ezahlukahlukene zokusebenzisa. Ishubhu lesampula linokubekwa uphawu okuhle, akukho ukuvuza, kuphephile futhi kunokwethenjelwa.
Futhi i-OEM ne-ODM yamukela ngesicelo sekhasimende.
Ukuqoqwa Kwesampula kusetshenziswa i-Flocked Swabs Technology
Ukuxilongwa okungcono kuqala ngamasampula angcono, futhi amasampula angcono atholakala ngokusebenzisa izindlela ezifanele zokuqoqwa kwesampula.
I-Cleanmo Flocked Swabs isetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene. Ukusetshenziswa okuvamile kwama-Flocked Swabs kungokwesampula le-nasopharyngeal
Uketshezi luketshezi lungena ngokushesha phakathi kwemicu ye-perpendicular ngesenzo se-capillary.
Zungezisa i-swab kabili noma kathathu bese ubamba i-swab endaweni yemizuzwana emi-5 ukuqinisekisa ukumunca okuphezulu.
Ama-hydraulic aqinile we-capillary phakathi kwemicu yeNayiloni akhulisa ukuqoqwa kwesampula ketshezi.
Faka i-swab endaweni yokuthutha bese uphula umgodi endaweni yokupenda edwetshiwe.
Isampula lilingana ngokuzenzakalela futhi ngokushesha ngoba ligcinwe lisondele kakhulu ebusweni ngesakhiwo esivuleke ngokuphelele.
Lokhu akuvimbeli amandla okugeleza, ngakho-ke sonke isampula siyakhishwa.
Alahlwayo igciwane izibonelo zalokho tube-A1
Isetshenziselwa ukuqoqwa kwesampula, ukuthuthwa kanye nokugcinwa, njll., Izibonelo ezixutshiwe zabantu abahlanu noma izibonelo ezixutshiwe zabantu abayishumi ukuthola i-nucleic acid
Alahlwayo igciwane izibonelo zalokho tube-A2
Alahlwayo igciwane izibonelo zalokho tube-B1
Isetshenziselwa ukuqoqwa kwesampula, ukuthuthwa, nokugcinwa, njll. Umuntu oyedwa usebenzisa ukutholwa kwe-nucleic acid
Alahlwayo igciwane izibonelo zalokho tube-B2
Langaphambilini Isitsha sokuqoqa igazi esilahlwayo
Izinkomishi zeLab Sample
Izinkomishi Ezincane Zesampula